Budata mSecure maka Windows
Free Budata maka Windows (4.50 MB)
mSecure bụ onye njikwa paswọọdụ efu maka Windows 8/8.1 kọmputa na mbadamba. Ngwa, nke na-echebe ozi nkeonwe gị dịka nọmba akaụntụ gị, aha njirimara na okwuntughe site na izo ya na nchekwa nchekwa 256-Bit, na-enye ihe karịrị onye njikwa paswọọdụ dị mfe.
Ninwe ụdị ọgbara ọhụrụ na njiri mara Windows 8, ngwa ahụ bụ onye njikwa paswọọdụ nke na-enye ojiji dị nnọọ iche site na ndị ogbo ya nwere oke nchekwa ya, usoro mgbochi ihe mgbochi, nkwado ndabere, imekọrịta data na Dropbox na njirimara ọchụchọ dị irè. .
Ọ dị oke nchebe; A na-echekwa data gị site na izo ya ezo nke ndị agha. A naghị echekwa okwuntughe gị nakụkụ ọ bụla nke ngwanrọ a. Site na mkpọchi akpaaka, data gị dị nchebe mgbe ngwa anaghị arụ ọrụ. A na -akwado data gị mgbe niile.
Ọ dị mfe iji; Ekewara data gị nime otu, edepụtara aha na ụdị. Enwere ndebiri ọkọlọtọ 19 na -enyere ntinye data ọsọ ọsọ aka. Site na njirimara ọchụchọ agbakwunyere, ị nwere ike iru ndekọ ngwa ngwa.
Ọ na -arụ ọrụ synchronously; A na -ejikọ data gị site na iji akaụntụ Dropbox gị.
Mmepụta: mSeven Software LLC